एक दिन 30० मिनेटमा सामाजिक मीडिया रक गर्नुहोस् Martech Zone
एक दिन 30० मिनेटमा सामाजिक मीडिया रक गर्नुहोस्
शुक्रबार, मार्च 29, 2013 Douglas Karr
हामी सामाजिक मिडिया मा एक धेरै ठूलो अनुसरण गरीरहेका छौं र हामी विभिन्न सामाजिक माध्यमहरु मा एक दर्शक भर मा एक टन साझा र प्रतिक्रिया। हामी एक सानो टोली हौं, केवल मुठी मुट्ठीभर मानिसहरू, तर मलाई लाग्छ कि हामी दिनभरि हाम्रा पाठकहरूलाई मद्दत गर्ने र उनीहरूलाई समयमै प्रतिक्रिया दिन एउटा ठूलो काम गर्छौं। त्यो भनियो ... यदि हामीले गरेको सबै कुरा निगरानी गरिएको थियो भने, प्रतिक्रिया दिनुहोस् र दिनभर सोशल मीडियामा साझा गर्नुहोस् मलाई यकिन छैन कि हामी कुनै पनि कामहरू प्राप्त गर्नेछौं जुन हाम्रा क्लाइन्टहरूले हामीलाई चाहन्छन्! र ती अन्ततः यहाँ बिलहरु को भुक्तान।
हामी त्यो महान उपकरणको स util्ग्रहको उपयोग गरेर गर्छौं। मलाई यो ब्लग लेख्न मनपर्नुको एक कारण यो छ। सस्तो उपकरणहरूको खोजी जसले हाम्रो कम्पनीलाई अनुगमन गर्न, प्रतिक्रिया दिन र हाम्रा श्रोताहरूलाई बढाउन मद्दत गर्छ हाम्रो मार्केटिंग र सोशल मिडिया सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ।
एक जीत सामाजिक मिडिया रणनीति होशियार काम को बारेमा सबै छ, कडा होईन। जब सम्म तपाईं एक उद्यम स्तर कम्पनी हुनुहुन्छ, तपाईं वास्तवमा आफ्नो सामाजिक मिडिया रक गर्न आवश्यक सबै एक दिन 30 मिनेट छ। Pardot जस्तै स्वचालन उपकरणको साथ धेरै समय लिने र दोहोरिने कार्यहरूको देखभाल गर्न, तपाईंलाई चाहिने सबै एक राम्रो परिभाषित दैनिक योजना र केही आत्म अनुशासन हो। तल परडोटको इन्फोग्राफिकबाट, एक दिन 30० मिनेटमा सामाजिक मीडिया रक गर्नुहोस्.
टैग: Minute० मिनेटको योजनामाफ गर्नुहोस्pardot विपणन स्वचालनसामाजिक मिडिया योजना
Mindmapping 101: Mindmapping सिद्धांतहरु